R/Wasaare Gaas oo xafiiskiisa kala shiray hay?adaha gargaarka si barakacayaasha Muqdisho wax loogu qabto – Radio Daljir
Abriil 10, 2012 12:00 b 0
Mogadishu,Apr 10 -Ra?iisul Wasaaraha Soomaaliya Prof Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta xafiiskiisa isagu yeeray hay?adaha Gar-gaarka Bani?aadanimo oo laga wada hadlay sidii wax loogu qaban lahaa barakacayaasha Muqdisho oo loogu heli lahaa degaan ay ka heli karaan dhammaan adeegyada bulshada.
Kulankan waxaa ka soo qeybgalay Wasiiru Dowlaha Xafiiska Ra?iisul Wasaaraha, Ku xigeenka Xiriiriyaha Qaramada Midoobey ee Arrimaha Gar-gaarka Bani?aadanimo, Guddoomiyaha Gobolka Banadir ahna Duqa Magaalada, Guddoomiye Ku xigeenka Hay?adda Masiibooyinka Qaranka, Madaxa Gar-gaarka Bani?aadanimo ee Xafiiska Ra?iisul Wasaaraha, xubno ka kala socday Qaramada Midoobey hay?adahooda kala duwan, AMISOM qeybteeda gar-gaarka bani?aadanimo iyo Ururka Islaamka Adduunka ah iyo xubno kale.
Ra?iisul Wasaaraha ayaa ka codsaday hay?adaha gar-gaarka inay dedejiyaan sidii shacabka Barakacayaasha loogu heli lahaa gar-gaarka ay is-taahilaan, si looga hortago cudurada ka dilaaci kara xerooyinka qaxootiga bacdamaa roobabkii ay soo fool leeyihiin.
Guddoomiyaha Gobolka Banadir ayaa sheegay inay diyaariyeeen dhul aad u ballaaran oo illaa 200 oo kun ay degi karaan, isla markaana ay dowladdu sugeyso amniga goobtaas, ha yeeshee Qaramada Midoobey iyo hay?adaha Gargaarka Bani?aadanimo ee caalamiga ah looga baahan yahay inay si deg-deg ah u hirgeliyaan mashruucan oo ay keenaan dhammaan tasiilaadkii barakacayaasha u baahnaayeen.
Kulanka markii uu soo dhammaaday ayaa waxaa saxaafadda la hadlay Wasiiru Dowlaha Xafiiska Ra?iisul Wasaaraha iyo Ku xigeenka Xiriiriyaha Qaramada Midoobey ee Soomaaliya. Wasiiru dowlaha ayaa sheegay in kulanka la isku afgartay in la sameeyo guddi farsamo oo hubiya in mashruucan uu hirgalo, oo ay dhammaan ka soo qeybgalayaashii kulanka isku raaceen.
Ku xigeenka Xiriiriyaha QM ayaa sheegay in barakacayaasha ay mudan yihiin inay helaan nolol wanaagsan, lana siin doono dhammaan adeegyadii bulshada sida biyo nadiif ah, caafimaad, waxbarasho iyo shaqo abuurid oo ay xaq u leeyihiin. Waxuu kaloo uu sheegay in QM ay ka go?an tahay sidii Muqdisho ay u noqon laheyd magaalo nadiif ah oo shacabka degan ay helaan dhammaan adeegyada bulshada.
Mogadishu, Somalia http://daljir.com/
Shil gaari oo sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay gobolka Nugaal.